Glass Bottle abenzi, abaxhobisi - China Glass Bottle Bottle Factory
I-16oz 500ml ecacileyo yeglasi ejikeleze iglasi yeebhotile zokutshiza ngomkhono wesilicone wokucoca ioyile
Siphuhlise le nto ilula kodwa inesitayile yeglasi yokuhambisa isitshizi ngomkhono we-silicon wokuzikhusela kwibhotile yeglasi. Ukusetyenziselwa zonke iimveliso zethu zokucoca. Gcwalisa nge-All Purpose Sanitiser Spray okanye i-Bathroom Cleaner Spray.
Iglasi ye-amber ye-300ml kunye neebhotile zokucoca ioli
Le bhotile yeglasi ye-300ml ebangela ukuba ibhotile yokutshiza ibonelele ngesithintelo esihle ngokuchasene nokufuma, igesi kunye nongcoliseko. Kungenxa yoko le nto kungcono ukugcina iimveliso zononophelo lwasekhaya, iziqholo ze-DIY, intlama yamazinyo kunye neekhrim kwiibhotile zokugcina iglasi. Akukho zithintelo kupakisho lweplastiki. Ngale khabhathi yokugcina iglasi, indawo yakho yokuhlambela eyi-zero-inkunkuma ikhangeleka intle kakhulu!
500ml 16oz cobalt blue blue iglasi engqukuva ibhotile yokutshiza nempompo neeoli ezixabisekileyo
I-16 oz Cobalt Blue Glass Spray Bottle yokuCoca i-DIY ngeeoyile eziBalulekileyo; I-non-Toxic, yonke-yendalo yendalo yokucoca iiresiphi eziprintwe kanye ecaleni. Ukuhlala kuqinisekisiwe. Yenziwe etshayina. Isitshizi w / umlambo, inkungu kunye nokuseta useto.
0.5oz 1oz 2oz 4oz cobalt blue blue iglasi ibhotile ngeenxa zonke ngeplastiki emnyama inkungu atomizer yokutshiza
Ngeziqholo kunye nezinto eziyimfuneko, le bhotile yeglasi iluhlaza kunye nesitshizi seatomizer lukhetho olufanelekileyo. Iglasi ye-4oz cobalt eluhlaza okwesibhakabhaka iya kukunceda uvelise imveliso yakho ngaphezulu kwabakhuphisana nabo, ngaloo ndlela unikeze indlela elula nesebenzayo yokutsala umdla wabathengi. Ibhotile yeglasi eluhlaza okwesibhakabhaka lukhetho oluthandwayo kubathengi be-aromatherapy kuba umbala oluhlaza weglasi unokunceda ukucoca imitha ye-ultraviolet.
Iglasi Bottle Nge Spray Pump, Iglasi Bottle Nge Pump wekhadi, Iibhotile zeglasi zeempompo zeeoyile ezifanelekileyo, Iglasi Ibhotile yokuthambisa ngePomp, Iibhotile zePompo yeGlasi yeShampoo, Sula iibhotile Pump Pump,